I-Glasgow Bay House Igumbi lokulala eliseNtshonalanga - I-Airbnb
I-Glasgow Bay House Igumbi lokulala eliseNtshonalanga
446 okushiwo abanye
Igumbi elingaphansi (bona izithombe) phezulu ezitebhisini eziwumngcingo. I-Douglas fir flooring endala kanye nephaneli kaphayini, umbhede osayizi ogcwele, itafula, izihlalo ezi-2 kanye ne-dresser, isiqandisi esincane. Ibhavu elineshawa encane yabelwa izivakashi ekamelweni elisempumalanga. I-heater encane yesitayela serediyetha yokushisa okwengeziwe. Izivakashi zikwazi ukufinyelela ikhishi elikhulu negumbi lokuhlala, i-TV enekhebula, i-Amazon Prime, i-Netflix, nezindawo zokuwasha, konke okwabelwana nathi, abanikazi. Wonke amashidi kakotini, izingubo zoboya kanye nemicamelo yaphansi. Ukudla kwasekuseni kuyatholakala.
Leli yikhaya elidala, enye ingxenye yalo eseyineminyaka engaphezu kwekhulu ikulesi sizinda; ibhlokhi elingaphezu kwesiza esidala sesikebhe ngaphambi kokuba kwakhiwe iBhuloho iMcCullough. Ngaphansi kwemayela ukusuka ku-Pacific Coast Highway 101.
4.92 · 446 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-446
IGlasgow iyindawo engahlanganisiwe yeCoos County ebheke iCoos Bay. Sikumakhilomitha amabili ukusuka edolobheni laseNorth Bend. Ngaphesheya komgwaqo kunemakethe kaMama ne-Pop yanoma yiziphi izinto zomzuzu wokugcina ongase uzidinge.
Uma sisekhaya, sithanda ukuzijabulisa nanoma yiziphi izihambeli ezifuna ukuxhuma. Siyabamukela nalabo abafisa ukusala bodwa. Cishe kabili ngenyanga, asikho lapho sibona udokotela/wamazinyo e-Portland. Kodwa sihlala sitholakala ngombhalo.